A man wearing a t-shirt with the inscription "marcia su Roma" (the march on Rome) demonstrates in central Rome's Piazza Venezia on May 30, 2020 in a tense atmosphere with the police, demanding the departure of the government of Prime Minister Giuseppe Conte, following the lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
A woman waves the Italian flag as people demonstrate in central Rome's Piazza Venezia on May 30, 2020 in a tense atmosphere with the police, demanding the departure of the government of Prime Minister Giuseppe Conte, following the lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
Demonstrators face police in central Rome's Piazza Venezia on May 30, 2020 as they demand the departure of the government of Prime Minister Giuseppe Conte, following the lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
A participant uses a megaphone as people demonstrate in central Rome's Piazza Venezia on May 30, 2020 in a tense atmosphere with the police, demanding the departure of the government of Prime Minister Giuseppe Conte, following the lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
A demonstrator holds up flowers as others face police in central Rome's Piazza Venezia on May 30, 2020 as they demand the departure of the government of Prime Minister Giuseppe Conte, following the lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)
Torna al post: Marcia su Roma, in centinaia al grido di “Abbiamo fame” e “Vogliono vaccinarci tutti”